Fagersta oo noqotay kamuunka ugu dhaqaalaha fiican | Somaliska
Fagersta oo noqotay kamuunka ugu dhaqaalaha fiican
Kommunka Fagersta ee ku yaala waqooyiga gobolka Västmanland ayaa noqtay kan ugu dhaqaalaha fiican kamuunada Sweden sida lagu soo bandhigay baaritaan uu sameeyay wargeyska Dagens Samhälle. Wargeyska oo baaritaan ku sameeyay dhaqaalaha iyo maamulka kamuunada Sweden ee 10-kii sano ee la soo dhaafay ayay Fagersta gashay booska koowaad.
Fagersta oo ka mid ah kamuunada ugu yar Sweden isla markaana ku yaala baadiyaha ayaa lagu amaanay maamul wanaagsan maadaama magaalada ay maamulaan hal xisbi. Waxaa qaasatan la amaanay gudoomiyaha degmada Stig Henriksson oo wax weyn ka badalay dhaqaalaha magaalada Fagersta tan iyo markii uu xilka la wareegay sanadkii 1998.
Kamuunada la dariska ah Fagersta ayaa liiska waxay ka galeen booska ugu hooseeya. Mar la waydiiyay sababta ay Fagersta ugu duwan tahay kamuunada kale ayuu gudoomiyaha degmada ku tilmaamay in maamul wanaagsan oo dhaqaale iyo is afgarad siyaasadeed ay yihiin furaha guusha.
Wargeyska Dagens Samhälle ayaa baaritaan ku sameeyay dhaqaalaha kamuunada inta u dhaxaysa sanadkii 2000-2009. Kamuunada ugu dhaqaalaha liita ayaa waxaa galay Nora, Degerfors, Hällefors iyo Laxå oo ka tirsan gobolka Örebro Län.
Kommunka Fagersta ayaa waxaa maamula Xisbiga Vänsterpartiet ee siyaasadooda ay tahay dhinaca bidixda. Sanadihii u dambeeyay ayaa magaalada Fagersta waxaa soo buux dhaafiyay Soomaali badan. Gudoomiyaha degmada ayaa ah nin ku faraxsan Soomaalida ku nool magaaladiisa isaga oo hada ka hor sheegay in ay yihiin mustaqbalka magaalada.
Iswiidhan oo dib u soo celineeysa sharcigii dhalinyaradda ee shaqada Qaran
Wow Hambalyo Fagersta halkaa kasii wada horumarinta degmadiina. Tan kale haddiiba uu Guddoomiyaha degmadan ku faraxsan yahay uuna sheegay iney Soomaalidu yihiin mustaqbalka Fagersta armaanba kasoo guuraa Kommunka shiidka ah een deganahay soomaalidana aan laga jeclayn.
Jimcaale guri iyo jaanis shaqo mala helaa mise waa adag tahay sida guri lagu helo kommunka Fagersta
sxb yaa sweden waa isku mid qof aan Erigssson AMA Anna aan loogu yeerin shaqo kama helayo ee ka nasta taas
Abdi Yari says:
Fagersta kommun, kan ett exempel för resten av Kommun. Jag är så stolt över Fagersta kommun. Bra jobbat!!..
November 12, 2012 at 18:45
Fagersta kommun waa degmo aad u yar marka waxey qabatay wax wanagsan somalida ku noolna waa ineey hawlaha horomarinta kommunkoda ay ka qayb qaataan.Midakale haduu gudomiyaha degmada soomaalida jeceyahay mahan in komuunkaas loo wada qaxo markaas waxey noqoneysaa kuwii la jeclaa iyo kuwii qaxay in lawada naco. Soomaalida sweden jogta lagama necbo qaxootiga kale ee wax qabatkooda ayaa aad u yar. waa mahadsantihiin
waaw waxan ugadigaya dadka walalahayga omaliyed ee degan degmadas hadiiba laydiin amanay isjira mel laydinka amanad gantihin swedan melkutala o somali laga amano horay uma maqal waa eray igu cusub marka somalay ha is dhiganina ee dad noqda oo karti muqata iyo magac wanaagsan yesha waxan idinrajayna tusale inad unoqotan umadan intedakale insha alah
waxa layabey jimcale dadka maxo ugu sojawabi waye mise islaweynin aya katahay dad badan aya su,alo weydiye umasojawabo marka maxo udhaha dadka aya wax kacawiye ama dadka wax ka cawi ama iska dey !!
Fagersta hambalyo iga hoo adiga iyo hoggaamiyahaaga Stig Henriksson iyo dhammaan inta ka qeybqaadatay horumarkaas oo aan hubo in Somalidu ay qeyb libaax ka qaateen. “Somalidu waa mustaqbalka magaalada” Waa erayo miisan weyn leh aadna u dhiirigelinaya Somalida oo kommuunnada kale ay ka haystaan sawir qaldan. Reer fagersta waxaan leeyahay guushaas aad Somalida sweden u soo hoyiseen si sahal ah ha u luminina oo noqda kuwo aan ku dayano.
asc dhaman fikirkeyga hadii aan ka dhiibto mowduucan horta hormarkan ay ku faaneyso magaladan fagersta waxa ay ku gaartey waa dhiiga dadka cusub oo ay ku shaqeysato sababta aan sidaas u leeyahay waxaa waye qofka yimaada fagersta waxaa isla malinta uu yimaado ayaaa pratik loo diraa ilaa ad ka carartid maahee laga deyn mayo shaqadeydana ma badna oo waa tuulo yar waa la iska kaa shaqeysanayaa marka ninkan madaxa ka ah magalada waan la kulmay dhowr mar ma xuma lkn siyaasada ay isticmaasho ayaa qalafsan magaladan
November 20, 2012 at 13:39
WAAN IDIN SALAMAY SXB BAYAAL WAA KAMUUN AAN CAADI AHAYN WAA INAAN USOO GUURAA HADUU GUDOOMIYUHU HADII KAMUUNKU I AQBALO WAAN KU FARAXSANAHAY SOODHAWAYNTA UU SO DHAWEEYAY SOMALIDA DHALIN YARADA DAGANA WAAN SALAMAYA DHAMAANTOOD MAGACOODA MASOO KOBI KARO HADA ASAXAABATA DHA SALAAMA DEE